डाउनलोड गर्नुहोस् Internet Download Manager को लागी Windows
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Windows (14.21 MB)
डाउनलोड गर्नुहोस् Internet Download Manager,
इन्टर्नेट डाउनलोड प्रबन्धक भनेको के हो?
इन्टर्नेट डाउनलोड प्रबन्धक (IDM / IDMAN) एक द्रुत फाईल डाउनलोड प्रोग्राम हो जुन क्रोम, ओपेरा र अन्य ब्राउजरहरूसँग एकीकृत हुन्छ। यस फाईल डाउनलोड प्रबन्धकको साथ, तपाईं इन्टरनेटबाट फिल्महरू डाउनलोड गर्ने, फाईलहरू डाउनलोड गर्ने, संगीत डाउनलोड गर्ने, युट्यूबबाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने जस्ता सबै डाउनलोड अपरेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट डाउनलोड प्रबन्धक, उत्तम फाइल डाउनलोडर, ,०-दिनको परीक्षण संस्करणको साथ आउँदछ र तपाईं निश्चित सुविधाहरूको लागि सबै सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ; त्यसो भए तपाईंले सिरियल नम्बर लिनु पर्छ र पूर्ण संस्करणमा अपग्रेड गर्नुहोस्।
इन्टर्नेट डाउनलोड प्रबन्धक एक शक्तिशाली फाइल डाउनलोड प्रबन्धक हो जसले तपाईंलाई इन्टरनेटमा times पटक छिटो फाइलहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। आईडीएम, जुन फायरफक्स, गुगल क्रोम, ओपेरा र इन्टर्नेट एक्स्प्लोरर जस्ता सबै लोकप्रिय इन्टरनेट ब्राउजरहरूसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ, यसले तपाईंलाई तपाईंको अधूरो डाउनलोडहरू जारी राख्न अनुमति दिन्छ जहाँ तपाईं छाड्नुभयो। तपाईं इन्टरनेट डाउनलोड प्रबन्धकको डाउनलोड बटन क्लिक गरेर प्रोग्राम डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
इन्टर्नेट डाउनलोड प्रबन्धक डाउनलोड गर्नुहोस्, IDM डाउनलोड गर्नुहोस्
धेरै सफा र व्यवस्थित प्रयोगकर्ता ईन्टरफेसको साथ, IDMAN ले सबै फाइल प्रबन्धन कार्यहरू धेरै सजिलो बनाउँदछ प्रयोगकर्ताहरूका लागि यसको ठूला र राम्रो देखिने बटनहरूको लागि धन्यवाद। तिनीहरूको डाउनलोडको आधारमा बिभिन्न फोल्डरहरूमा सबै डाउनलोडहरू डाउनलोड गर्दा, उत्पन्न हुन सक्ने कन्फ्युजनहरू जोगिन्छ र डाउनलोड गरिएका फाइलहरूको लागि पूर्ण अर्डर प्रदान गरिन्छ। थप रूपमा, कार्यक्रममा उन्नत सेटिंग्स मेनूलाई धन्यवाद, तपाईं विभिन्न फाइल प्रकारहरू र डाउनलोड स्रोतहरूका लागि आवश्यक समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
इन्टर्नेट डाउनलोड प्रबन्धक, जसले आफैं आफैं अपडेट गर्न सक्दछ जब नयाँ अपडेट जारी हुन्छ, प्रयोगकर्तालाई कार्यक्रमको अन्तिम संस्करण लगातार प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
थप रूपमा, ड्र्याग एण्ड ड्रप समर्थन, कार्य अनुसूची, भाइरस सुरक्षा, डाउनलोड कतार, HTTPS समर्थन, कमाण्ड लाइन प्यारामिटर, ध्वनि, ZIP पूर्वावलोकन, प्रोक्सी सर्भर र IDM मा कोटा प्रगतिशील डाउनलोड जस्ता सुविधाहरूको लागि धन्यवाद, प्रयोगकर्ताहरू सबै हुन सक्दछ चीजहरू उनीहरूलाई डाउनलोड प्रबन्धकमा चाहिन्छ। तिनीहरूसँग सुविधाहरू हुन सक्छन्।
इन्टर्नेट डाउनलोड प्रबन्धक, जुन मैले मेरो परीक्षणको क्रममा कुनै समस्याको सामना गरिन, प्रणाली संसाधनहरूको धेरै कम मात्रा प्रयोग गर्दछ। अवश्य पनि हामीले भन्नु पर्छ कि यो फाईल आकार र डाउनलोड गतिमा निर्भर गर्दछ।
अन्तमा, यदि तपाईंलाई उन्नत सुविधाहरूको साथ पेशेवर प्रोग्रामको आवश्यकता छ जुन तपाईं आफ्नो फाइलहरू इन्टरनेटमा डाउनलोड गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंले निश्चित रूपमा इन्टरनेट डाउनलोड प्रबन्धकको प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईं सजिलैसँग इन्टरनेट डाउनलोड प्रबन्धक डाउनलोड बटनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
इन्टर्नेट डाउनलोड प्रबन्धक कसरी प्रयोग गर्ने?
इन्टरनेट डाउनलोड प्रबन्धक (आईडीएम) को साथ चलचित्रहरू, भिडियोहरू, संगीत, फाईलहरू डाउनलोड गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्:
आईडीएमले गुगल क्रोम, मोजिला फायरफक्स, माइक्रोसफ्ट एज, इन्टरनेट एक्सप्लोरर ११, ओपेरा र अन्य इन्टरनेट ब्राउजरमा क्लिक ट्र्याक गर्दछ। यो विधि सब भन्दा सजिलो छ। यदि तपाईं गुगल क्रोम वा कुनै अन्य ब्राउजरमा डाउनलोड लिंक क्लिक गर्नुहुन्छ भने, इन्टरनेट डाउनलोड प्रबन्धकले यस डाउनलोडलाई लिन र यसलाई छिटो लिनेछ। यस अवस्थामा तपाईले केहि विशेष गर्नुपर्दैन, तपाईले सधैं इन्टरनेट सर्फ गर्नुभयो। IDM ले Google Chrome बाट डाउनलोड लिनेछ यदि यो फाइल प्रकार / विस्तारसँग मेल खान्छ भने। फाईल प्रकार / एक्सटेन्सनहरूको सूची आईडीएमसँग डाउनलोड गर्न विकल्पहरू - सामान्यमा सम्पादन गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं पछि डाउनलोड गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् यदि फाईल डाउनलोड विन्डो खुल्छ, यूआरएल (वेब ​​ठेगाना) डाउनलोड सूचीमा थपियो भने डाउनलोड सुरु हुँदैन। यदि तपाइँ सुरू क्लिक गर्नुहुन्छ, IDM तुरून्त फाइल डाउनलोड गर्न सुरू गर्दछ। आईडीएम,तपाइँलाई डाउनलोडहरू IDM कोटिहरूसँग सम्बद्ध गर्न अनुमति दिन्छ। IDM फाईल प्रकारको आधारमा कोटी र पूर्वनिर्धारित डाउनलोड निर्देशिका सुझाव गर्दछ। तपाईं सम्पादन गर्न वा कोटीहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ र मुख्य आईडीएम विन्डोमा नयाँ कोटीहरू थप्न सक्नुहुनेछ। तपाईं पूर्वावलोकन बटन क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु अघि संकुचित फाइलको सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ CTRL लाई समात्नुहुन्छ ब्राउजरमा डाउनलोड लिंक क्लिक गर्दा, IDM ले कुनै पनि डाउनलोड लिन्छ, यदि तपाइँ ALT होल्ड गर्नुहुन्छ, IDM ले डाउनलोड लिदैन र ब्राउजरलाई फाइल डाउनलोड गर्न अनुमति दिदैन। यदि तपाईं ब्राउजरबाट कुनै डाउनलोड लिन आईडीएम लिन चाहनुहुन्न भने, आईडीएम विकल्पहरूमा ब्राउजर एकीकरण बन्द गर्नुहोस्। IDM विकल्पहरू - सामान्यमा ब्राउजर बन्द गरीरहेको बेला वा ब्राउजर पुन: सुरु गर्न नबिर्सनुहोस्।यदि तपाईंलाई इन्टरनेट डाउनलोड प्रबन्धकको साथ डाउनलोड गर्न समस्या भइरहेको छ भने, ALT कुञ्जी थिच्नुहोस्।
IDM वैध URL (वेब ​​ठेगानाहरू) को लागि क्लिपबोर्ड मोनिटर गर्दछ। IDM कस्टम विस्तार प्रकारहरूको साथ यूआरएलहरूको लागि प्रणाली क्लिपबोर्ड मोनिटर गर्दछ। जब वेब ठेगाना क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि हुन्छ, IDM डाउनलोड सुरु गर्न संवाद प्रदर्शित गर्दछ। यदि तपाईं ठीक क्लिक गर्नुहुन्छ भने, IDM डाउनलोड सुरु गर्दछ।
आईडीएम आईई-आधारित (एमएसएन, एओएल, अवन्त) र मोजिला-आधारित (फायरफक्स, नेटस्केप) ब्राउजरहरूको दायाँ क्लिक मेनूमा एकीकृत गर्दछ। यदि तपाइँ ब्राउजरमा लिंकमा दायाँ क्लिक गर्नुभयो भने, तपाइँ IDM को साथ डाउनलोड देख्नुहुनेछ। तपाईं चयन गरिएका पाठमा सबै लिंकहरू वा HTML पृष्ठबाट विशेष लिंक डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। फाइल डाउनलोड गर्ने यो विधि उपयोगी छ यदि आईडीएमले स्वचालित रूपमा डाउनलोड लिदैन। आईडीएमको साथ लिंक डाउनलोड गर्न सुरू गर्न केवल यो विकल्प चयन गर्नुहोस्।
तपाईं मैन्युअल्ली एक URL (वेब ​​ठेगाना) थप्न सक्नुहुन्छ URL थप्नुहोस् बटनको साथ। तपाईं URL मा थप्नुहोस् डाउनलोडको लागि नयाँ फाईल थप्न सक्नुहुन्छ। तपाई टेक्स्ट बक्समा नयाँ यूआरएल इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ वा अवस्थित एकबाट एक छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ सर्वरलाई प्राधिकरण चाहिएको खण्डमा प्रयोग प्राधिकरण बक्स जाँच गरेर पनि लगइन जानकारी निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
ब्राउजरबाट आईडीएम मुख्य विन्डो वा डाउनलोड कार्टमा लिंकहरू तान्नुहोस् र छोड्नुहोस्। ड्रप लक्ष्य एक विन्डो हो जसले इन्टर्नेट एक्स्प्लोरर, ओपेरा वा अन्य ब्राउजरहरूबाट तानिएको हाइपरलिंकहरू प्राप्त गर्दछ। तपाईं आईडीएमको साथ तपाईंको डाउनलोडहरू सुरू गर्न यस विन्डोमा तपाईंको ब्राउजरबाट लिंक ड्र्याग गर्न र ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं आदेश रेखा प्यारामिटरहरू प्रयोग गरेर आदेश रेखाबाट डाउनलोड सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं तलका प्यारामिटरहरू प्रयोग गरेर आदेश रेखाबाट IDM सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
Internet Download Manager चश्मा
फाईल आकार: 14.21 MB
विकासकर्ता: Tonec, Inc.
पछिल्लो अद्यावधिक: 26-12-2021
डाउनलोड गर्नुहोस्: 11,183